Eskişehirမီးရထားစနစ်များကိုဂျာမနီနိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် RayHaber | raillynews
26 / 09 / 2014 49 ဂျာမဏီ, ဥရောပ, လောက, လှုပ်ရှားမှုများ, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း
Eskişehirမီးရထားစနစ်များဂျာမနီအတွက်ကမ္ဘာသို့မိတ်ဆက်: Eskisehir အတွက်ဂျာမဏီ InnoTrans 2014 ကျင်းပခဲ့သောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြပွဲဒီနှစ်၏အလေးချိန်ခံစားရတယ်။
ဘာလင် InnoTrans ပြပွဲတိုင်းနှစ်နှစ်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုသိသာအလှူငွေဒီနှစ်Eskişehirကနေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကန်ထရိုက်တာသည်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Eskisehir Eskisehir တူရကီရဲ့ရထားလမ်းစနစ်များနှင့်စွမ်းရည်များမိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်အရေးကြီးသောအဆက်အသွယ်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်အားဖြင့်တရားမျှတမှာကိုယ်စားပြု Savronik, Hisar နှင့်ရထားစနစ်များ Cluster ကုမ္ပဏီတွေ။
ဒေသတွင်း၌သူ၏အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ Eskisehir အုပ်ချုပ်ရေးမှူးGüngör Azim တူနာအတွက်ပြပွဲဖွင့်ပွဲဤကိစ်စတှငျ Eskisehir နှင့်ထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များကပြောကြားခဲ့သည်။
Tulomsas တူရကီကုမ္ပဏီများအားဖြင့်ပြုသောအမှုတို့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ဖို့ GE ကစီစဉ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့်အတူစက်ခေါင်း၏မျိုးဆက်သစ်သင်တန်းသားများထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြရှိရာတရားမျှတမှာပြဂျီတို့ကပူးတွဲထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ဤအဝိုင်း ပတ်သက်. အကဲဖြတ်အတွက်ရထားစနစ်များကိုသမ္မတကာဣနန်Işıkပြွတ်ခံရ, "ဒီပြပွဲနှင့် Eskisehir ၏အလေးချိန်နှင့်အရေးပါမှုအတွက်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွင်းစက်မှုရဲ့အရေးအပါဆုံးအဖြစ်အပျက် ပို. ပို. ပို. ပို. ခံစားခဲ့ရခံရ။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ပိုပြီးပြည်ပမှာအများကြီးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများလိုအပ်နေသောတူရကီပြင်ပအဖြစ်ပြည်ပမှာစီမံကိန်းများအတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ်လိုသည်ဟုမြင်တော်မူ၏။ အခုတော့ကွန်ကရစ်စီမံကိန်းများနှင့်စီးပွားရေးမိတ်ဖက်အစီအစဉ်အပေါ်လာ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား (eBUS) ကိုကမ္ဘာသို့မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
တူရကီ-ဂျာမနီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာတမ်းဖတ်ပွဲ (ဗီဒီယို) Eskisehir ကျင်းပခဲ့သည်
24ဘီလီယံကိုပေါင်စီမံကိန်းကိုကမ္ဘာ့တပ်မတော်မိတ်ဆက်ပေးဦးမည်
ကမ္ဘာ့ဖလား Bursa မြှင့်တင်နိုင်ရန် '' Uludag က Ultra မာရသွန် ''
ကမ္ဘာ့ဖလားမြှင့်တင်ပေးရန်ကမ္ဘာ့ဖလား Motocross ချန်ပီယံရှစ်, တူရကီ
တူရကီရဲ့ရထားလမ်းသမိုင်း၌ဝင်ရိုး Eskisehir ကမ္ဘာကိုပြောသည်ခံရဖို့
ထုတ်လုပ်သူ Eskisehir များအတွက်ရထားလမ်းစနစ်များမိတ်ဆက်စှမျး။
Anatolian ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၏ Cluster ARUS သည်yüzdeဖြစ်သည်
အိမျတျော၌ BTK မီးရထားလမ်း '' ဖြိုဖျက်ဒိုင်းနမိုက်ဖြင့်ပျက်သောစပါးခဲ့သည်
ဒုတိယအ Marmaray အဆိုပါခရိုင်မှအနာ